Ukwenziwa lula kuqikelelo olulula lwezibalo (ikholamu 473) - Rabbi Michael Avraham
Ukwenziwa lula kuqikelelo-manani olulula (ikholamu 473)
16 izimvo	/ 07 Iyar 05 - 2022/XNUMX/XNUMX 07 / 05 / 2022
Ukuthatha ixesha elide?
Layisha kwakhona uxwebhu
Khuphela [321.87 KB]
Khuphela [53.66 KB]
Iingcinga ezili-16 “Ngokwenza Lula Uqikelelo Olulula Lweenkcukacha-manani (Uluhlu lwama-473)”
Z. Bayer 07 - 05/2022/23 ngo 14:XNUMX
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 ngo 07:XNUMX
Kumxholo wengxoxo kaBibi, ingxoxo ithatha ukuba kukho ubuninzi obunye, xa kunokwenzeka (kwaye nokuba kunokwenzeka) ukuba zininzi ezinomtsalane, kwaye ke ngoko ubuncinci obunye. Ngokwezinto eziphathekayo ingxoxo ayisebenzi kancinane, into ethethwa yingxoxo kukuba kukho izinga lerhafu elilelona liphezulu (ngokwemali yengeniso karhulumente), impikiswano encinci. Umbuzo obalulekileyo ngowokuba yeyiphi eyona pesenti iphezulu, enokwahluka ukusuka kolunye uqoqosho ukuya kolunye kunye nemeko yoqoqosho olukhulu.
Ngamafutshane, ulwazi oluncinci oluqulathwe yimodeli (iingqikelelo ezichanekileyo malunga nenyani) lungabalulekanga kangako.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 ngo 13:XNUMX
Esi sesona sigxeko sibuthathaka. Ayinanyani kwaphela, kuba isenokwenzeka ukuba ibe nobuninzi obunye kuphela, kwaye kwinkalo nganye ubuncinane ingqina ukuba akuyomfuneko ukuba irhafu inyuse ingeniso. Le yeyona ngxoxo iphambili.
Kananjalo andivumi ukuba ulwazi oluncinci aluncedi kangako. Nalapha kukho inkqubo entsonkothileyo eneyona nto iphezulu.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 ngo 29:XNUMX
Khange ndifunde, kodwa ndafumana inqaku elinye elabamba iliso lam. Ubhale ukuba ngokombono wakho xa kungekho lwazi malunga nenkqubo yokusabalalisa ngoko akunakwenzeka ukuba uthethe malunga nengqiqo. Ukuthetha ngale nto uyikhankanyileyo ekugqibeleni ukuhambelana neengxoxo malunga no-Gd kunye nendalo, kumxholo wokungqina ububodwa benkqubo yezomthetho bendicinga ukuba wenze ibango lokuba okukodwa kunokufunwa ngaphandle kolwazi malunga nenkqubo yokuhambisa. Yintoni umahluko?
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 ngo 44:XNUMX
Xa inkqubo ingaziwa kuthi konke kodwa kukho inkqubo ethile apho, akukho sizathu sokucinga ukuba ukuhanjiswa kufana. Njengoko bendigqabaza, oku kukusilela endingazokwakhela phezu kwayo kakhulu. Kodwa kwimbono ye-physiological theology kukho ukucinga ukuba ukubunjwa kwehlabathi kuyimeko epheleleyo ukusuka kwinto engekho nto (ngaphandle koko umbuzo uya kuhlala yintoni eyadala into eyayikho ngaphambili). Kwimeko enjalo ukucinga ukuba ukuhanjiswa okufanayo kuyeyona nto ifanelekileyo kwaye inengqiqo. Ulwabiwo olungalinganiyo lufuna isizathu. Kwilotho yemiphefumlo, nokuba lenziwa nguThixo okanye ngenye indlela kukho isizathu, kwaye umntu kufuneka asazi esi sizathu sokuthetha okuthile ngako.
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 ngo 56:XNUMX
I'm complicated kodwa ndiza kuzama ukuphuthaphutha ngakumbi. Kunzima kum ukubona umahluko phakathi konikezelo olufanayo kunye nokungalingani, kodwa ndiya kuyishiya apho (kuba luluvo olufuna ukuphononongwa) kwaye ndibuze ngenye indlela-ebonakala ngathi lunikezelo olufanayo (lulungele ukuqwalaselwa kwe-symmetry) ikhetheke kakhulu kunosasazo olungenayunifomu.
Ukongeza, kwaye ndiyathemba ukuba andiphazami kwaye ndiphazamise, kubonakala ngathi kumbandela wezinto ezininzi ezithintelweyo ukuba kukho iindlela zehardware.
H. Bayer 08 - 05/2022/16 ngo 53:XNUMX
ngqo. Ngoko ke ukuhanjiswa okufanayo kucingelwa ngokungabikho kolunye ulwazi. Yeyona ilula kwaye ilinganisa kakhulu.
Ngokumalunga ne-halakhah kwizithintelo, imeko nganye ngokufanelekileyo. Kodwa kukho umntu ohamba nje emva kokuqwalaselwa kwezibalo kodwa emva kwemithetho ye-halakhic yezomthetho (umzekelo, ukuzama ukulula. Kukho imigaqo ye-meta-legal enefuthe, njl.).
H. Bayer 08 - 05/2022/18 ngo 53:XNUMX
Ukuba yeyona ilula kwaye ilingana kakhulu ngoko ke yeyona ikhethekileyo yohlobo lwayo, kwaye okwangoku? Iindlela zokuziphilisa njl.
H. Bayer 08 - 05/2022/20 ngo 30:XNUMX
Asazi unikezelo grill. Ulwabiwo lulawula ilotho. Ulwabiwo olufanayo luyinto elula kwaye ngoko kucingelwa. Kanye njengokuba amachaphaza okuthunga kumgca othe ngqo kungcono kunokuwathunga ecaleni kwesine, nangona unokuthi umgca othe ngqo ngowona ulula kwaye ngoko ke ukhethekileyo.
H. Bayer 08 - 05/2022/21 ngo 40:XNUMX
Kubonakala ngathi usuka kwindawo oze kuyo ngomgca othe tye kuba ubona ukuba kukho umgca olula nokhethekileyo othungayo malunga nokuba yintoni na ke ngoko kusenokwenzeka ukuba ayisiyonto yanto yanto. Kodwa asinakucinga kwindawo yokuqala ukuba into ethile iya kuwa kumgca othe tye ngaphandle kwe-ankile. Ndiyaqonda ukuba uthi iingqwalasela ezilula ziyi-priori, kodwa umgca uyibonisa njani loo nto.
(Ndiye ndacamngca phambi kwenkcazo yangaphambili malunga nelotho yokuhanjiswa kwaye andizange ndiyifumane kwaye ndisazibuza)
H. Bayer 09 - 05/2022/07 ngo 38:XNUMX
Andiyiqondi kakuhle ukuba le ngxoxo ingantoni na. Ngaba awuvumi ukuba ngokungabikho kolunye ulwazi ukuhanjiswa okufanayo kunokwenzeka? Kutheni wenze umahluko phakathi kweziphumo? Ukuba umntu akazi malunga nomahluko phakathi kweziphumo kwindawo yesampulu kunokwenzeka ukuba zonke zinobunzima obufanayo. Andazi ukuba mandidibanise ntoni.
H. Bayer 09 - 05/2022/09 ngo 48:XNUMX
Kodwa unoluvo lokuba nangona kungekho lwazi ukuhanjiswa okufanayo kwimiphefumlo akunakwenzeka. Kwaye uchaze ukuba kungenxa yokuba kukho inkqubo engaziwayo, kwaye kuphela ekuveleni kokungagqitywanga iinkqubo zemithetho bekumele ukuba zivele ngokusasazwa okufanayo kwaye ngoko ke ubunye benkqubo bunobungqina bendalo.
Andikabi nalo uluvo luqinileyo, kwaye mhlawumbi kukho umahluko phakathi kwangaphambi kweziganeko (ukuba umntu ubala ulindelo kufuneka athathe unikezelo olufanayo) kwaye emva kokuba yenzekile (ke kunzima kakhulu ukucinga ukuba kufanele. kwenzeke ngendlela efanayo). Kwaye MM ngendlela yakho ndibuzile kwaye ukuba ndidiniwe ndidiniwe.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 ngo 32:XNUMX
ngqo. Kwaye ndachaza isahlulo. Kwinkqubo iimeko zokuhambisa zifana. Kwinkqubo yokhetho akukho sizathu sokucinga ngokuchanekileyo oko. Kwaye ndongeze ukuba mhlawumbi le yinto endiya kuyithatha ngaphandle kolwazi, kodwa andiyi kwakha nantoni na kuyo.
Kubonakala kum ukuba siphelile.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 ngo 54:XNUMX
Ngaba ungenza nje kucace kum ukuba ndiyaqonda ngokuchanekileyo ukuba kubungqina bokungabi nanto (ucinga ukuba kunokwenzeka, ngenxa yokubonakalisa iPetah Tikva ezimeleyo kwi-cosmology) uxela ngokuqinisekileyo ukuba kuya kubakho ukuhanjiswa okufanayo (kwaye oku ibango elibalulekileyo lobungqina), hayi nje ingqikelelo yokunqongophala kolwazi.
H. Bayer 09 - 05/2022/13 ngo 38:XNUMX
Ewe. Ukuba ayivelanga ndawo ke kufuneka iphathwe njengokwabiwa okufanayo.
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 ngo 30:XNUMX
Ukuba ukucinga kukuba asiyiyo ekhethekileyo, ngoko akunandaba nokuba kwenzeka ntoni kuthi okokuqala okanye kutshanje, ngokunokwenzeka kwe-50% okanye i-1 nge-trillion, ngokwemigaqo yezibalo okanye ngokuchaseneyo. ukuya ku. Zonke ezi zinto azitshintshi kwaphela. Ngapha koko, asingomntu okhethekileyo.
Ngoko yonke le ngxoxo ayiyomfuneko.
Yomelele Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
UMaor Shrikki Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Isandla. Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Samu Alcomisi Vula Isalathiso kwiividiyo ze-iGod